कोरोना भाइरसका संक्रमित १६ दिनमा ६ गुणा बृद्धि – Lokpati.com
पक्राउ मृत्यु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड सरकार अपराध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा चितवन नेपाली काँग्रेस राशिफल प्रचण्ड केपी शर्मा ओली अमेरिका नेपाल प्रहरी प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, १५ जेठ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमित १६ दिनमा छ गुणाले वृद्धि भएको छ। बितेको तीन दिनमा लगातार रेकर्ड तोडिने गरी संक्रमित संख्या एकै दिनमा अत्याधिक वृद्धि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अबको अवस्था भयावह हुनसक्ने आँकलन गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अस्पताल संक्रमितले भरिने बताएका छन्। उनले भने, ‘अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिनेछ ।’ भविष्यको चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र योजनाहरु बनाउन थालिएको छ। जसमध्ये अब संक्रमितको उपचार घरमै गर्ने व्यवस्था समेत गरिदैछ।
डा. देवकोटाले कोरोना संक्रमितका लागि होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने दिन पनि आउने बताए। उनले भने, सबैले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमै आइशोलेशनमा संक्रमित बस्ने व्यवस्था गरिंदा समुदायमा सहयोग गर्न आउनेलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गरे।देवकोटाले अब झन् सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको बताए। उनले संक्रमितको अवस्था हेरेर अस्पतालमा कसरी राख्ने भन्ने व्यवस्था हुने बताए । आज एकै दिनमा १७० कोरोना भाइरसका संक्रमित बढेसँगै अस्पतालमा निकै दबाब परेको छ। देशमा एकै दिन १७० संक्रमित बढेर कुल संख्या १२१२ पुगिसकेको छ। संक्रमणबाट ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। वृद्धिदर उच्च हुँदै गएपछि जोखिम बढेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।
क्वारेन्टाइन बसेकाहरुलाई आरडिटी मात्र परीक्षण गरेर घर पठाइयो